Kohambo IsiNgesi Premier League By Train | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Kohambo IsiNgesi Premier League By Train
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 25/12/2020)
Kuba kubahambi kwenzeka ukuba babe nomdla ezemidlalo, yokuhambela England okufanayo Premier League kungaba eyodwa amava. Nangona amaqela ezimbalwa kunyuka ukuya niwe iligi ngalinye lonyaka, ithetha ukuba zange ncam kabini emgceni, kuhlala kunjalo ukuba kokuba Ndolula lonke eNgilani naseWales. Ikhe yenza Premier League ukuba uhlobo uhambo zendalo ukuba lo ungafuna ukuhlola ilizwe. Oku kubandakanya imizi ezigqamileyo, ezinye iziboniso bayayithanda le zendawo isiko, kwaye ezinye ziyinyani amabala emidlalo amangalisayo. Plus, ngokum- ukusuka kwesinye isixeko ukuya elilandelayo unokukunika tshuphe emihle ezisemaphandleni odumileyo British!
Ngokunyanisekileyo olu hlobo hambo ukuba ziyilwe zonke iintlobo ngeendlela ezahlukeneyo, unikwe ukuba Premier League ibandakanya 20 amaqela ngexesha ngalinye. Le yinto isampuli nakuba, malunga neendlela ezahlukeneyo onokuzenza kunye imizi, zemidlalo, kunye namaqela ungabona.
ELondon ukuya Brighton
Ngokuba kuhle ukuba uqale eli uhlobo uhambo eLondon ngenxa yezizathu ezibini. Ekuqaleni, kuba kulapho sele kakhulu ukuba fly zibe kunjalo. nowesibini, nto ekhaya kumaqela eziliqela Premier League, ithetha Yindawo entle ukuqalisa kunye nesiphelo uhambo lwakho ukuba loop nice malunga Britain. Ungaqala iiklabhu eziliqela, kodwa ndingathanda isincomo ukubona Chelsea e Stamford Bridge. Indawo leyo kakhulu, enye simo Premier League amabala ikhale 140 minyaka yomlando nabalinganiswa njengezinto ukuba ayigcine phakathi best. Kwaye ke iqela phantse lonk nokhuphiswano (kwaye kufuneka zibe 2018 njengokuba).
ukusuka London, indlela emfutshane ukuqala engasezantsi waya Brighton. Ku va ukhwele ephela kwenye best iidolophu beach eNgilani e Brighton ngokukhawuleza kakhulu. station London Victoria, London Bridge Station, ne London St. station Pancras bonke ekhwela ngqo ukuba kuthathe iyure.
Brighton ku eCardiff
Kanye e Brighton, uyakwazi kuzolula imilenze yakho ngokuhamba phakathi kwezinye iindawo ezikhethekileyo ngokwenene. pier Esi sixeko sidume (kwaye umbulelo ukonwabisa kakhulu kwisibhakabhaka yayo abanolusu ezifana), kwaye kukho ezimbalwa iivenkile ezindala kunye nezithili restaurant ezixabisa uhlola. Football olumke, uya kuba vuphukuphuku ku Stadium Falmer, leyo yenye abasebatsha akule league. Brighton & Hove Albion akukho usomandla kwi ukubhabha top of football IsiNgesi, kodwa abalandeli zalo bawuthande kunye umdlalo yindlela entle kakhulu uchithe kwemini okanye ngokuhlwa esikwingingqi eshushu beach idolophu ekwindla.
I-Lille ukuya eLondon i-Eurostar yoLoliwe
Rotterdam ukuya eLondon Eurostar Uloliwe
IAntwerp eya eLondon i-Eurostar Trains
emva Brighton, kuza kufuneka uqale ejikeleza phezulu ukuya ngasentshona, iinketho kunye indawo bambalwa. Ningaba Uhambo ku Bournemouth okanye Southampton ekumzantsi, njengokuba, njengoko kuthabathela emizini Sinamaqela Premier League. Kodwa ke ngenxa yokuba football kungcono emntla (ngoko ke iidolophu, ngokuphikisana), ngokuba kuhle ukuba uqale nokuya emntla kwakunye. Ngoko ke ingcebiso eya eCardiff, Wales. Oololiwe ukusuka Brighton kwisitishi ukuya eCardiff Central ingaqalisa ukusuka ezine ukuya ezine-and-enesiqingatha iiyure, nge abasuka utshintsho enye ukuya kwezintathu. oololiwe kulo mzila ukubaleka ngaphezulu okanye ngaphantsi imini yonke.
YaseCardiff ku Liverpool
eCardiff, uya kuba ubona iCardiff City kwi City Stadium yaseCardiff, nto leyo indawo athandana ngokufanelekileyo kweli nqanaba. Kwaye ukuba kwenzeka ngamaxesha uhambo lwakho ukuze ubone umdlalo usukuzwano nxamnye Swansea City, uya uzakubakho isipho ngokwenene. Oku kufuneka ekugqibeleni ibe yokumisa ngokwanelisayo ngokukhawuleza kunjalo en eya kwiidolophu yebhola ekhatywayo ezinkulu ekude. i ezintathu- ukuba uloliwe iiyure ezine ukusuka eCardiff Central ukuya Liverpool Lime Isitalato Ingcebiso yam. Yinto a rhoqo kakuhle ziqondile indlela, ngokuqhelekileyo nje utshintsho elinye okanye amabini, kwaye ithatha nawe ukuya kungena entliziyweni football IsiNgesi. Singasathethi uloliwe kuthatha nawe uhambe Cotswolds, indawo zendalo langa yiloo a utsalo lwezotyelelo futhi ngokwalo.
Liverpool ku Newcastle
e Liverpool, ungafuna ukubekela bucala ixesha elithile ukuze ukuhlola, eyona nto sisixeko siyinyaniso emangalisayo. Kodwa football iseyinto etsala umdla omkhulu. Anfield, apho Liverpool idlala, kwaziwa ukuba phakathi amabala best Premier League, kwaye abaninzi bakholelwa oku kungaba unyaka ukuba iqela aphinde Premier League uzuko kwaye bamba ubuntshatsheli. Loo nto nje kuthi ukuba nkundla, sele eyaziwa ngokuba amandla ayo, kufuneka ayihlali kunyaka ozayo okanye ukuze, kwaye wenze kakuhle okuhle football zonke UK.
ukusuka kule indawo, kukho i iinketho ezimbalwa. Ukuba ixesha sakho sinciphile, kusenokuba kungcono ukuthatha uhambo mfutshane kakhulu Manchester ngaphambi kokuba abuyele ku London. Ukuba kukho ixesha, kunjalo, Ndingathanda sincoma ukuya ezidlulileyo Manchester yaye ngasemntla, ngomhla ebekufanele ukuba kalukhuni, ndoxelelwa ngubani ukukhwela evela Liverpool Lime Street ku Newcastle zeeyure ezintathu. Ungafumana ngqo ukukhwela, kwaye lo gama oku kufana umgama elide yolu ngqameko yonke kwimaphu, ngokwenene akukho nto uhambo embi.
st. Park James 'e Newcastle isenokuba bala amnandi akule league, nokuba awukwazi kakhulu singavumani imbali indawo efana Anfield. Yinto elihle, weza eyodwa, enye phi kubakho kakhulu nentwana nkanuko. Kanjalo, ngaphambi kokuba league qwenge yakutshanje, kwacetyiswa Newcastle akwazi ngokungazali ubedlala ngenxa buzz omtsha-isizini Tyneside kwaye uthando nenkolo yokuba kuza kwesi sihlwele. Loo nto yayimhlupha akazange eze ukuba, kodwa oku isekhona indawo idolo ukubukela umdlalo ngenxa ezifanayo yezizathu ezibonisiweyo. Loo nto yenza kube yafakwa eziluncedo.
Emva komdlalo msinya e Newcastle, uyakwazi ukubamba uloliwe wabuyela eManchester, mhlawumbe on mini kakhulu ukuba ukuhlela kusebenza ngaphandle. Newcastle Station Central ku eManchester Victoria kufuneka ibe emibini enesiqingatha uhambo iyure ngaphandle utshintsho ngaphezu kwesinye.
Kukho iinketho ezininzi eManchester, njengoko ezimbini amaqela ezigqamileyo le league ngayo – Manchester City and Manchester United – umnxeba ekhaya isixeko. Ukuba ingakumbi kwi ekhatywayo kwaye ukuba njengabangalisebenzisi njengendlela ukuya hambo elungileyo, kufuneka uzame ukubamba omabini amaqela go enye, ukuba ucwangciso ivumela. kungenjalo, ukuze flip kwakunye ingqekembe. Man Utd. KaThixo Trafford eNdala lomlandu benkundla omnye nabalandeli emangalisayo; Stadium Etihad Man lweSixeko ubalule-of-the-art ngaphezulu, kunye City kuye iqela ngcono mvanje.
Xa sele kwenziwe Manchester ukuba ekhanyayo, emibini enesiqingatha okanye uloliwe iiyure ezintathu ndikhwele emva London ukusuka eManchester Victoria okanye Manchester Piccadilly. Ngelo xesha, yohambo a urhangqo lwemigca! Nangona ungafuna ukusebenzisa ixesha lakho eliseleyo eLondon ukubona omnye kwiiklabhu ungazange ubone ekuqaleni hambo. njengoko kukhankanyiwe, kukho ezininzi zilungileyo unokuzikhetha.
Ingaba ukulungele ukuhlola umdla kuqeqesha olichitha webhola? le website engcono Order Trains amatikiti yi Gcina A Isitimela
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftouring-the-english-premier-league-by-train%2F%0A- (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#football #ibhola train Travel traveltips